What is your Philosophy towards work? ﻿
Tags: the most common interview questions philosophy towards work.
ဒီမေးခွန်းကို ဖြေရတော့မယ်ဆိုရင် စကားကြီး စကားကျယ် မပြောမိဖို့ သတိပြု ဆင်ခြင်ရပါမယ်။ လုပ်ငန်းခွင်မှာ ဝန်ထမ်းတစ်ယောက် ကျင့်သုံးရမယ့် အခြေခံ အချက်တွေကို စနစ်တကျ ရွေးချယ် ပြောဆိုတတ်ဖို့လိုပါတယ်။
ဒါကြောင့် အလုပ်ဆိုတာ ဘဝဖြစ်ကြောင်း၊ အလုပ်မရှိရင် ဘဝအဓိပ္ပါယ်မရှိကြောင်း၊ လူမှန်ရင် အလုပ် လုပ်သင့်ကြောင်း အစရှိတဲ့ အတွေးအခေါ်အယူအဆတွေကို ဘေးဖယ်ပြီး ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်အတွက် အဓိက အခြေခံ ကျင့်ဝတ်တွေဖြစ်တဲ့ စည်းကမ်းလိုက်နာခြင်း၊ အလုပ်တာဝန်ကျေပွန်ခြင်း၊ အသင်းအဖွဲ့နှင့် လုပ်ဆောင်တတ်ခြင်း၊ အားသွန်ခွန်စိုက်လုပ်ကိုင်ခြင်း စတဲ့ လုပ်ငန်းခွင်အောင်မြင်မှု အခြေခံ အကြောင်းတရားတွေကို ဦးစားပေး ဖြေဆိုသင့်ပါတယ်။ ဒီလိုဖြေဆိုတဲ့နေရာမှာလည်း ကိုယ့်အယူအဆကို ဒီအခြေခံအချက်တွေပေါ်မှာ ပေါင်းစပ်ဖြေဆိုမှသာ ကိုယ်ပိုင်အတွေးအခေါ်အယူအဆရှိတဲ့ အဖြေတစ်ခု ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာ သိထားဖို့လိုပါမယ်။